Golaha Wasiirada Sweden oo la magacaabay iyo Mudane Soomaali ah oo baarlamaanka soo galay | Somaliska
Raysal wasaaraha Sweden Fredrik Reinfeldt ayaa magacaabay golahiisa wasiirada. Asagoo balaariyay kolaha wasiirada si uu qanciyo xulufada xisbigiisa. Xukumada uu magacaabay Raysal wasaare Reinfeldt ayaa noqoneysa mid minorati ah oo aan akhlabiyad lahayn ayadoo laga cabsi qabo in ay dhib ku noqoto in ay fuliyaan ajandayaashooda. Raysal wasaaraha ayaa maanta sheegay in uu xoojin doono arimaha soo galootiga iyo is dhex galka, asagoo sheegay in dowlada ay lacag dheeri ah ku bixin doonto sidii dadka soo galootiga ah ay ula qabsan lahaayeen dalka ayadoo taageero dheeri ah la siin doono SFIga. Arinta kale ee xiisaha leh ayaa ah in mudane Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdirisaaq Waaberi uu soo galay baarlamaanka, mudanaha ayaa ka tirsan xisbiga moderatka. Waaberi ayaa ka soo galay baarlamaanka magaalada Goteborg. Mudanaha ayaa waxaa wareysi la yeelatay idaacada Sveriges Radio ayadoo ay sheegeen in lagu eedeeyo in uu yahay xagjir Islaami ah, balse sida laga dheehan karo wareysigiisa ayay u muuqataa in mudanuhu uu galay badweyn intuu is difaacayay.
Halkaan ka dhageyso wareysiga Cabdrisaaq Waaberi.
Golaha Wasiirada Sweden oo la magacaabay iyo Mudane Soomaali ah oo baarlamaanka soo galay
Raysal wasaaraha Sweden Fredrik Reinfeldt ayaa magacaabay golahiisa wasiirada. Asagoo balaariyay kolaha wasiirada si uu qanciyo xulufada xisbigiisa. Xukumada uu magacaabay Raysal wasaare Reinfeldt ayaa noqoneysa mid minorati ah oo aan akhlabiyad lahayn ayadoo laga cabsi qabo in ay dhib ku noqoto in ay fuliyaan ajandayaashooda.
Raysal wasaaraha ayaa maanta sheegay in uu xoojin doono arimaha soo galootiga iyo is dhex galka, asagoo sheegay in dowlada ay lacag dheeri ah ku bixin doonto sidii dadka soo galootiga ah ay ula qabsan lahaayeen dalka ayadoo taageero dheeri ah la siin doono SFIga.
Arinta kale ee xiisaha leh ayaa ah in mudane Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdirisaaq Waaberi uu soo galay baarlamaanka, mudanaha ayaa ka tirsan xisbiga moderatka. Waaberi ayaa ka soo galay baarlamaanka magaalada Goteborg.
Mudanaha ayaa waxaa wareysi la yeelatay idaacada Sveriges Radio ayadoo ay sheegeen in lagu eedeeyo in uu yahay xagjir Islaami ah, balse sida laga dheehan karo wareysigiisa ayay u muuqataa in mudanuhu uu galay badweyn intuu is difaacayay.